Ogow Nooca Caqliga Ee Canugaada.. 4 Nooc Oo Caqli ah | Xaqiiqonews
Ogow Nooca Caqliga Ee Canugaada.. 4 Nooc Oo Caqli ah
Inta badan waxa aan xoogga saarnaa labada nooca caqliga ee kala ah “caqliga qofka ee dhanka xisaabaadka, iyo caqliga qofka ee luuqadda iyo hadalka” laakiinse waxaa jira noocyo kale oo badan.
Xaqiiqonews-Saynis/Isbar Horumarinta Nafta
Sideedameyada qarnigii tagay aqoonyahan ka tirsan jaamacadda Hartford ayaa wax ka qoray macluumaad ku saabsan noocyo badan oo caqli ah.
Waxa aan idin soo gudbineynaa 4- ka mid ah waxyaabihii uu oqray Howard Gardner oo ka tirsanaa jaamacadda Hartford iyo sida looga faa’ideysan karo.
1- Caqliga “Xisaabaadka”
waa awoodda uu qofka u leeyahay in uu wax xisaabiyo, in uu xalin karo su’aalaha ,in uu awood u leeyahay in uu wax sababeeyo islamarkaana uu saadaaliyo natiijada.
Nooca caqligan waxaa loo isticmaalaa in lagu furo xujooyinka, hal-xiraalayaasha, sidoo kale nooca caqligani waa kan xoogga badan la saaro marka la joogo goobaha waxbarashada ee wadamada Galbeedka.
2- Caqliga Deegaanka
Waa awoodda uu qof u leeyahay in uu sawirto sawir caqliyeed khiyaali ah oo heersare ah oo ku saabsan dunida, iyo goobaha.
Caqligan waxaa si gaar ah uu u quseeyaa faniiniinta, darwalada, baaylootyada,dadka barta cilmiga juquraafiga iyo dadka socotada a, si gaar ah qofka caqligan leh waxaa aad looga qiimeyn jiray deegaanada Miyaga Soomaalida.
Xirafad fiican oo uu qof u yeesho dhaxgalka Bulshada waxaa ay ka dhigan tahay in uu dhibco fiican ka haysto wax loogu yeero “Caqliga bulshada.
Caqligan waxaa si gaar ah looga baahanyahay Macalimiinta, siyaasiyiinta iyo ganacsatada.
Waxa aan ku kasban karnaa caqligan, hadii aan badino shaqooyin kooxeedka,sidoo kale waxa lagu kasban karaa doodaha bulshada iyo xiriirada kale.
Sidoo kale Aqriso: Sidee-canugaada-aad-ugu-dhigi-kartaa-muqrtaric-mid-wax-soo-hindisaqaab-fudud/
4- Caqliga Luuqadda iyo Hadalka
Waa awoodda uu qofka u leeyahay in uu isticmaalo “erayada” iyo kalimadaha duurxulka ah, islamarkaana uu u hadli karo qaab fiican, in uu leeyahay xasuus fiiican oo ah taariikhyada iyo magacyada,waa awoodda qofka uu ku soo warin karo shekooyinka qosolka leh, waana wax qofka ka dhigga in uu ku fiican yaay “Khudbad jeedinta”
Nooca caqligan waxa aan ku shaqeysan karnaa, in aan leenahay awood wax aqrin oo fiican, islamarkaana qofka uusan ka caajiseen wax baarista.